Romelu Lukaku oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha Maarso ee Premier League – Gool FM
(Liverpool) 31 Maarso 2017 – Dhaliyaha kooxda kubadda cagta Everton ee Romelu Lukaku ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddigii bisha Maarso ugu fiicnaa horyaalka Premier League.
Xiddiga xulka qaranka Belgian ayaa hoggaaminaya haatan gooldhalinta horyaalka Premier League waxaana uu leeyahay 21 gool.
Lukaku ayaa saddex kulan oo uu Everton u ciyaaray bishan Maarso waxa uu dhaliyay afar gool, isagoo caawiye ka ahaa labo gool kale, taasoo ku hoggaamisay in loo caleemo saaro abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa Premier League bishaan maanta gabagabada ah ee Maarso.
23-sano jirkaan ayaa abaal-marinta xiddiga bisha Maarso ee Premier League ku garaacay ciyaaryahanno dhowr ah sida goolhayaha kooxda Bournemouth Artur Boruc, Joshua King, Nathan Redmond, Mamadou Sakho iyo xiddiga khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum.
Abaal-marinta waxaa go’aansada guddi madax banaan sida khabiirrada ciyaaraha ee Jamie Carragher iyo Thierry Heny iyo codka dadweynaha oo u dhigma 10% codadka guud ahaan la xisaabinayo, kabtannada kooxaha Premier League ayaa iyaguna u codeeya guuleystaha.